अचम्मः शिक्षकले पढाए नपढाएको निगरानी अब विद्यार्थी गर्ने « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
अचम्मः शिक्षकले पढाए नपढाएको निगरानी अब विद्यार्थी गर्ने
फलेवास, पर्वत, २८ जेठ
पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–१२ स्थित जनता सुदर्शन माविका कक्षा ६ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा सबैभन्दा राम्रो पढाउने र सबैभन्दा कम पढाउने शिक्षकको होला ? भनेर प्रश्न गर्दा सबैले एकै स्वरमा ती शिक्षकको नाम बताइदिए ।
नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाबाट अनुगमनमा पुगेको टोलीसँग उनीहरुले राम्रो शिक्षण गर्ने र ठगेर हिँड्ने शिक्षकको रेर्कड प्रस्तुत गरेका हुन ।
शिक्षकका दैनिक क्रियाकलाप विद्यार्थीले नजिकबाट नियालेर बसेका हुन्छन भने उनीहरुको मूल्यांकन समेत गरेका हुन्छन भन्ने कुरा अनुगमनका क्रममा देखिएको छ ।
“विद्यार्थीले राम्रोसँग अध्यापन गराउने र कक्षाकोठामा ठगी गर्ने शिक्षकका बारेमा रेकर्ड राखेरै विवरण दिए” नगरशिक्षा अधिकृत राजेन्द्र क्षेत्रीले भने “आफ्नो बारेमा विद्यार्थीले रेकर्ड राखेका हुन्छन भन्ने सोचेर शिक्षकले कक्षाकोठामा पुगेर मेहनतका साथ पढाउन जरुरी छ ।”
अनुगमन टोलीले जनता सुदर्शन मावि, खौलालाँकुरी मावि, पञ्चकोशी मावि लगायतका विद्यालयका कक्षाकोठामा पुगेर शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ उपलब्धिका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
अनुगमनका क्रममा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारकालागि असल अभ्यास पनि भइरहेको भेटिएको थियो भने धेरै राम्रा विद्यार्थी पनि भेटिएका थिए । उनीहरुकालागि उपयुक्त वातावरण शिक्षक, विद्यालय र अभिभावकले दिने हो भने धेरै सुधार गरेर जान सकिने सम्भाबना रहेको स्रोतव्यक्ति प्रेम शर्मा सुवेदीले बताए ।
“सामुदायिक विद्यालयले पनि गुणस्तर सुधारका लागि धेरै प्रयास गरिरहेका छन” उनले भने “यसलाई निरन्तरता दिँदै थप असल अभ्यास गर्न जरुरी देखिएको छ ।”
अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीको सिकाइस्तर कस्तो छ ? विद्यालयमा के कस्ता समस्या छ ? त्यसको समाधानका लागि के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? विद्यालयका भौतिक लगायत अन्य क्षेत्रमा के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भने वारेमा सरोकारवालाबीच छलफल समेत गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा नगरशिक्षा अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री, स्रोत व्यक्ति प्रेम शर्मा सुवेदी, रामप्रसाद लामिछाने र कुमार उपाध्याय तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।